दशैंको बेला “लकडाउन” बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै गर्यो यस्तो सूचना जारी ! जान्नै पर्ने ; – AB Sansar
October 6, 2020 adminLeaveaComment on दशैंको बेला “लकडाउन” बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै गर्यो यस्तो सूचना जारी ! जान्नै पर्ने ;
महाराष्ट्रको एक शहरमा सडक तथा खेतमा रहेको पानीको रंग एक्कासी भयो नीलो , सबै किसान डरले त्रसित, नदी नालाका माछा समेत मर्न थाले !!